October 2021 – Nyi Ma Lay
၁။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အိမ်အနေအထားကိုအရင်ဦးဆုံးရွေးချယ်ပါ…၂။အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ ဘယ်ပုံစံလိုချင်လဲ စဉ်းစားပါ…၃။အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအုတ်သုံးစေချင်သလဲ ဥပမာ ဘိလပ်မြေအုတ်လား။မြေအုတ်လား။ CLC လားသေချာ ဆုံးဖြတ်ပါ။ ၄။ဘိလပ်မြေက ထိုင်ဆင်လား။ ကြံ့နီလား ။အပါချီလား အယ်ဖာလားအစရှိသဖြင့်ရွေးချယ်ပါ…၅။အဆောက်အဦးက သံကူကွန်ဂရစ်အမျိုးအစား(RCC)အဆောက်အဦး လိုချင်တာလား။ သံတိုင်ထောင်ပြီး အုပ်ညှပ်တဲ့ […]
အသားမည်း သူတွေ အသုံးပြုလို့ မရတဲ့ အလိုလျှောက် ဆပ်ပြာထုတ်စက်
အင်တာနက် လူမှုကွန်ယ က်ေ ပါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ အလိုလျှောက် ဆပ်ပြာထုတ်စ က်ကိုတော့ တစ်ချို ့တွေက လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့၊ သို့မဟုတ် အသားရော င်ခွဲခြားရေးဝါဒီ စက်လို့ အမည်ပေး ထားကြပါတယ်။ အဆိုပါ စက်ဟာ ရေပိုက်ခေါ […]
`အိုလာရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ ? ? ? ၁ ။ အိုဖေါ် ( လင် မယား အို ) ၂ ။ အို သိုက် ( နေအိမ် ) […]
မော်တော် ယာဉ်ကုမ္ပဏြီ ကီးများနှင့် ဆက်စ ပ်ကုမ္ပဏီများက ယာဉ်မေ တာ်တဆ ဖြစ်ပွားမှုများ၌ လူသားတို့အသ က်အန္တရာယ် လျှော့ချပေးနို င်မည့် နည်းလမ်းများ ကို တီထွင်ဖ န်တီးကြရာမှ အသက်ကယ်ေ လအိတ် စနစ် SRS(Supplemental […]
ဖေ့စ်ဘွတ်က လုပ်ငန်းသုံး ပင်မ ကုမ္ပဏီ နာမည်အဖြစ် Meta (မက်တာ) လို့ ပြောင်းလဲ လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းကြေညာလို က်ပါတယ်။ အခုလို လုပ်ငန်း နာမည် ပြောင်းခြင်းဟာ တခုချင်း အလိုက် ရှိထားပြီ ဖြစ်တဲ့ […]
သင့်အိမ် ထဲကို ပိုးမွှားတွေ ဘယ်ေ တာ့မှ မလာစေေ တာ့မယ့် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်း (၁၀) မျိုး
သင့်အိမ်ကို ပိုးမွှားကင်း စင်တဲ့အိမ်တစ်အိမ်ဖြစ်စေ ချင်ပေမဲ့ ဓါတုပိုးသတ်ေ ဆးတွေကိုသုံးဖို့လက်တွန့်နေလား။ သင့်ရွေးချယ် မှုမှန်ပါတယ်။ ဓါတုပိုးသတ်ေ ဆးတွေဟာ အပြင်းဆုံးဆုံး အဆိပ်ေ တွဖြစ်ပီး ပိုးမွှားတွေ ကိုသာမက လူကိုလည်း ဒုက္ခကောင်းေ ကာင်းပေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုရှော င်လွှားနိုင်ဖို့ဆို […]
Promotion ticket ကိုရအောင်ဝယ်ပါ Check In Counterမှာ ချိုချဉ်ထားပေးထားရင် လက်တဆုပ်လောက် မသိမသာယူ အိတ်ထဲထည့်ထားပါ… လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေမှာလဲ ချိုချဉ်ရှိရင် ထပ်ယူပါ… ထွက်ခွာ စောင့်ဆိုင်းနေရာရောက်ရင် free call phone ဆီ အပြေးသွားပြီး […]
စစ်ကိုင်းေ တာင် တစ်ဖက်ကမ်း ကရွှေကြက်ယက် ရွှေကြ က်ကျဘု ရားတွေဖြစ်ပြီး ဒီဆု တောင်းပြည့်ကိုယ်ေ တာ်မြတ် ကြီးကတော့ ရွှေကြက်ယက်စေ တီအတွင်းမှာ ရှိပါတယ် အနော်ရထာ မင်းကြီးလက်ထ က်မှာ တစ်ကြိမ်…၊ နရပတိစည်သူ မင်းကြီးလက် […]
ကားမော င်းတဲ့အခါ ထိုင်ခုံ ခါးပတ် ပတ်ဖို့နဲ့ မပတ် ခဲ့ရင် ဒဏ်ရိုက် မယ်ဆိုပြီး ဥပဒေသ တ်မှတ်ထားတာ ကိုတော့ အားလုံး သိကြပြီးသား ဖြစ်မှာ ပါ။ ဒါကြောင့် ယခုတစ်ခါဖော်ြ ပပေးချင် ကတော့ […]
ငွေကြေးတစုံတရာ ကုန်ကျမှုမရှိပဲ နိဗ္ဗာန်ထိတောင် ပို့ပေးနိုင်သော အလှူကုသိုလ် (၇)မျိုး
ငွေကြေး မရှိသော်လည်း နေ့စဉ်လှူ ဒါန်းနိုင်ေ သာအလှူဒါန(၇)မျိုး အ ခါတပါး၌ လူငယ်တစ်ေ ယာက်သည် မြတ်စွာဘုရားထံ သို့ချဉ်းကပ် ၍အကျွန်ုပ် သည်မည်သည့်အရာ ကိုပဲလုပ် လုပ်မအောင်မြ မင် ဖြစ်နေပါသည် အဘယ်ကြောင့် မအောင်မမြင် ဖြစ်နေပါသနည်းဟု […]